Jery ​​todika amin'ny fiantsenana fialantsasatra amin'ny 2013, ary ny tokony ho ao an-tsaina ho an'ny 2014 | Martech Zone
Alohan'ny hametrahanao ny vato ny teti-bolanao amin'ny marketing amin'ity taona ity, alao antoka fa hijerena ny zavatra azontsika ianarana tamin'ity taona lasa ity ianao. Ny fahalalana ny angona tsotra vitsivitsy tamin'ny vanim-potoana fiantsenana 2013 dia mety hanampy amin'ny fampahalalana ny fomba fifandraisanao sy ny varotrao amin'ny mpanjifa. Mba hahitana izay nanampy sy nandratra ny traikefan'ny mpanjifa nandritra ny fetin'ny fialantsasatra 2013, Baynote nanadihady ireo mpiantsena 1,000 ary nanangona ny angon-drakitra tao amin'ny infographic etsy ambany.
Raha mikasika ny fitaomana ny mpiantsena, 48% ny mpanjifa nilaza fa ny naoty sy ny fijerena no nahatonga azy ireo hitsidika fivarotana an-tserasera, arahin'ny fampiroboroboana mailaka amin'ny 35% ary valin'ny fikarohana google izay misy sary 31%. Dimy amby fitopolo isan-jaton'ireo nohadihadiana dia nanadihady naoty ary nandinika in-droa na mihoatra alohan'ny hitsidihana ireo magazay. Raha 145% ny vehivavy mazàna hitondra fampiroboroboana mailaka amin'ny finday avo lenta amin'ny fivarotana an-tsena, ny lehilahy kosa dia 20% kokoa mitady ny vidiny tsara kokoa any an-kafa alohan'ny hanaovana ny fividianany any amin'ny magazay. Tamin'ny 2013, nitombo 48% ny fampiasana ny fampiharana marika misy ny fivarotana ary ny fivarotana manome ny traikefa mpanjifa nomerika maharitra sy mahomby indrindra dia nahazo ny varotra betsaka indrindra.
Moralin'ny tantara? Rehefa mivarotra vokatra amin'ny mpanjifa dia ilaina ny mitadidy an-tsaina nomerika, finday manokana. Mihabetsaka ny mpiantsena no manao ny fikarohana sy mitady fomba hahazoana fifanarahana (fambara: mailaka barotra), ary ity fironana ity dia hitohy hitombo miaraka amin'ireo fitaovana finday azo idirana. Araho ary araho ary diniho ny tsikerao, ampidiro ny sary, ampiasao ny mailaka ary ampivoaro tsara izay fampiharana azonao antoka fa efa niomana ho amin'ny fahombiazan'ny taona 2014 ianao.
Tags: mpanjifaDataecommercemailaka MarketingSary torohay-barotraFivarotana finday sy tabletteantsinjarany